အဘယ်အရာကို box ကိုထဲကပွုနိုငျသနညျး
ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်သင်ကစားစရာ box ကိုကြီးမားတဲ့ရန်သင့်ကလေးကိုဆောင် ခဲ့. ကြောင်းဖြစ်ပျက်များနှင့်ရလဒ်အဖြစ်သူတစ်ဦး box ကိုနှင့်ထောင့်တွင် forlornly လဲလျောင်းနေတဲ့ကစားစရာနှင့်အတူကကစားခဲ့ဖူးပါသလား ယခင်ကအမြိုးသားအသူတို့ကိုယ်သူတို့တဲဆောက်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ခဲ့, ယခုတစ်ဆင်သင့်ရှိ တဲကို ။ ယခင်ကသင်သည်ဂိမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့တီထွင်ခဲ့ပေမယ့်ယခုအဆင်သင့်အရာအားလုံးကိုစတိုးဆိုင်စင်ပေါ်အပေါ်ရေးထိုး။ ဒါကသားသမီးတို့အဘို့သေတ္တာများထဲကဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်အရာကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမိဘများပစ္စုပ္ပန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်ကသင်သည်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာနှင့်အတူတက်လာနိုငျသညျ!
အဆိုပါယောက်ျားလေးများအားလုံးအတော်လေးယုတ္တိနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအတူ။ သေးငယ်တဲ့အနိုငျကငျြ့ဘို့တစ်ကတ်ထူပြား box ထဲကရေးဆွဲနိုင်သည့်ပထမဦးဆုံးအရာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာသင်လုံးဝအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်များမှာ!
သငျသညျအထူးသဖြင့်ကန့်သတ်အချိန်သို့မဟုတ်ရှိပါကရုံအလုံအလောက်ချဖွင့်နှင့်တံခါးကိုနှင့်အတူအောက်ခြေမဲနှိုက်အလင်းအိမ်ရန်, မည်သည့်တူရိယာမရှိကြပါဘူး။ သငျသညျကားကိုဖန်ဆင်း! တစ်တိပ်, ကတ်ကြေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အချိန်နည်းနည်းရှိလြှငျ, သင်ကဒုံးပျံသင်္ဘောပင်နတ်မင်းကြီးပန်းကန်တည်ဆောက်နိုင်သည်!
သင်ရုံအတူတူအချိန်ဖြုန်းနှင့်အထူးတစ်ခုခုဖြစ်စေလျက်, အသွားအလာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လိုလျှင်ကောင်းပြီ, လူအခြို့သေးငယ်တဲ့ပြိုင်ကားကားများအဘို့အပုဒ်စေရန်စီမံခန့်ခွဲ။ သင်ရေခဲသေတ္တာကဲ့သို့ကြီးမားသောအမှုအရာများအချည်းနှီးသောသေတ္တာများထဲကလိုလုပျနိုငျအရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးအနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာ, ကရိုးရှင်းစွာတီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအာကာသဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးအတွင်းပိုင်းကိုတက်နှင့်ခဲတံများနှင့်ခံစားခဲ့ရ-အစွန်အဖျားခြံများများပေးခွင့်ပြုပါရန်လုံလောက်ပေ။ သူလုပ်ပေးမှအတိအကျဘာကိုတွေ့သေချာပါစေ! ထိုသို့သင်တစ်ဦးယောက်ျားလေးများအတွက်သေတ္တာထဲကလုပျနိုငျတဲ့အသုံးဝင်သောအရာ box ရဲ့သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဒဏ်ငွေမော်တာကျွမ်းကျင်မှု, အမည်ရအဆိုပါကြီးမားတဲ့ဇာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမှကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျစားသောက်ကြလိမ့်မည်နှင့်ဆိုပါကကောင်းပြီ, နည်းနည်း Knight လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ဖို့လိုလားသူတို့ box ကိုဖဲ့ထဲကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံး၏အတိအကျတူညီနည်းလမ်း, သင်ကသေးငယ်စက်ရုပ်ဝတ်စုံစေနိုင်သည်။ စကားမစပ်, သင်သည်သင်၏ကလေးနှင့်ကလေးတစ်ဦးစက်ရုပ်ပုံတိုးတက်မှုနှုန်းကိုပြုသဖြင့်နှင့်သင့်ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအလှဆင်ဖို့ကပေးနိုင်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ကတ်ထူပြား box ထဲကရေးဆွဲဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမနည်းတစ်ဦးမိန်းမပျိုများအတွက်သေတ္တာထဲကပြုသောအမှုနိုင်ဘာသာရပ်။ ပထမဦးဆုံးအရပျ၌ကဒီမှာသတိရသင်တန်း၏အိမ်တအိမ်ကြွလာ! နှင့်မိဘများကဒီမှာအများဆုံးခေတ်မီဆန်းပြားသောဒီဇိုင်းနှင့်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းမတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကတ်ထူပြားပရိဘောဂနှင့်အိမ်များအတွက်အလှဆင်ပစ္စည်းများလုပ်သည့်အခါတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ပင်ရှိပါသည်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့ hideaway ပြောဆိုရန်ဒါ, box ကိုထဲကမိန်းကလေးတစ်ဦးအနည်းငယ်သာအိမျတျောကိုလုပျသငျ့အားရပ်တန့်နေသနည်း ကလေးအစပြုလုပ်ဆောင် ယူ. ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကသာထိုကဲ့သို့လေ့လာမှုများ၏တန်ဖိုးတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရဲတိုက်လိုသလား? ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လက်နက်ကတ်ထူပြားတစ်ဦး Knight ကျနော်တို့ပြီးသားရှိသည်! စကားမစပ်ကြောင့်လည်းတစ်ဦးကတ်ထူပြားရဲတိုက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
သေချာပေါက်လူ့ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာကြီးစွာသောအိမ်၌လုပ်မထားဘူး။ အရုပ်အိမ်များနှင့်အတူကစားခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားအဟောင်းတွေမိန်းကလေးငယ်များသည်။ တဖန်သင်တို့ကန့်သတ်မဟုတျပါဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။ Okleit ပြုပြင်ပြီးနောက်အကြွင်းအကျန်ကိုရှာဖွေဆုကြေးဇူးကိုထုပ်စက္ကူသို့မဟုတ်နောက်ခံပုံများအတွက်အနည်းငယ်သာအခန်းထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်။ အိမ်သူအိမ်သားအများအပြားပုံပြင်များ၏ရေးစပ်လျှင်, သင်၏သမီးသေချာဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်!
box ကိုထဲကပြုသောအမှုနိုင်နောက်ထပ်မနည်းကိုကြီးစွာသော option ကို - ဤမီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်မီးဖိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်အလွယ်တကူကော်နှင့်ရောင်စုံစက္ကူအဖြစ်အများအပြားအထည်သို့မဟုတ်ဆေးသုတ်ကောက်လို့ရပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကိုအထူးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့မစတင်! အဆိုပါထစ်များနှင့်အရောင်များ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုတူညီတဲ့နည်းလမ်းအားဖြင့်အချို့သော box ကိုအဝတ်လျှော်စက်တွေနဲ့ပန်းကန်ဆေးစက်ကိုဖွင့်ရန်, လုံးဝမဆိုမီးဖိုချောင်မီးဖိုလုပ်ပန်းချီ။ တိုတိုမှာ, ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားမဆိုအသေးစားနှင့်အကြီးစားကရိယာသေတ္တာများရှိနိုင်ပါသည်။ အလွန်စိတ်ကူးများနှင့်သင်ကလေးသည် box ကိုသူ့ဟာသူပေး, ထိုသို့ဆက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားခြင်းနှင့်သင်ကစဉ်းစားနိုငျကွောငျးသငျသညျပွောကွလိမျ့မညျသာလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူတို့အကြမ်းဖက်တွေနဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ် စိတ်ကူးယဉ် !
စက္ကူ crossbow အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ gel ဖယောင်းတိုင်
စက္ကူ piggy သည်ဘဏ်လုပ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဘယ်လို risotto ချက်ပြုတ်ဖို့ - လျှို့ဝှက်ချက်များကိုများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများစုံလင်သောအစားအစာများ
အကူအညီတောင်း Radonezh ဆုတောင်း Sergius
Polycystic သားဥအိမ် - လက္ခဏာများ